Dad Qaxooti Ah Oo U Dhashay Congo Oo Lagu Dhibaateeyay Dalka Angola – somalilandtoday.com
Dad Qaxooti Ah Oo U Dhashay Congo Oo Lagu Dhibaateeyay Dalka Angola
(SLT-Congo)-Dad qaxooti ah oo u dhashay dalka Jamhuuriyadda Dimuquraadiga ee Congo oo ka soo qaxay woqooyi bari dalka dersika ahi ee nbgola ayaa sheegaya in dhibaato ba’an loo geystay dad ka shaqeeya qodista macdanka.
Dad goob joogeyaal ahi oo halkaasi isaga soo cararay ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in ciidamada ammaanka ee Angola ay laayeen dhawr qof oo rayid ah, gubeenna guryo isla markaana ay boobeen hanti badan balse eedeymahaasi ayaa waxaa beeniyay mas’uuliyiinta dalka Angola.
Labadii todobaad ee lasoo dhaafay kumanaan kun oo qof oo intooda badan kasoo jeeda Jamhuuriyada Dimoqaraadiga ee Congo ayaa kusii quqlqulayay xuduuda dalkaasi kadib marki lagu qasbay inay isaga qaxaan dalka dariska la’a ah ee Angola.
Dhacdadaan ayaa kusoo aadeysa xili xukuumada Angola ay gaartay go’aan ay isbedel ugu sameyneyso goobaha dheemanka laga qodo ayna uga nadiifineyso dadka ay u arakto inay si sharcidarro ah u qodonayaan dheemanka dalkaasi.
Saxafi la shaqeeyso wakaalada wararka ee Reuters ayaa kula hadashay dadkaasi soo qaxaya gobolka waqooyi ee Lucapa.
Waxa ay dadkaasi u sheegeen weriyaha in booliiska iyo askarta dalka Angola ay xoog ku galeen magaaladaasi iyagoo burburiyay guryo boobayna alaabo ay kamid yihiin telefishino iyo faranjeero, sidoo kalena ku dilay halkaasi dhowr qof oo dad ah, oo mid ka mid ah la sheegay in ay gowraceen booliiskaasi.
Madaxa booliiska dalka Anogla ayaase beeniyay dhammaan eedeymahaasi iyo inay geysteen tacadiyo ka dhan ah xuquuqul insaanka.
Guilia Paravicini waa weriye la shaqeeyso Reuters oo ku sugan mid ka mid ah magaalooyinka ku dhaw xadka ay wadaagaan labada dal ee Congo iyo Angola.
Iyadoo u waramaysay BBC ayaa waxay tilmaantay qaar ka mid ah qisooyinkii xanuunka badnaa ee ay maqashay.
Dadka u dhashay Conoga ee kasoo qaxaya waqooyi Bari Angola ayaa sheegay in weeraro waxashnimo ah lagu soo qaaday shaqaalo tira yar oo kuwa macdanta qoda.
Goobjoogaayaal kasoo qaxay goobta la weeraray ayaa u sheegay wakaalada wararka ee Reuters in laamaha ammaanka ee Angola ay xoog ku galeen magaalada Lucapa ayna dileen tobanaan qof.